Sat, Jul 21, 2018 | 21:29:13 NST
सुदर्शन राजोपाध्याय् - न जन्ति न मलामी भूकम्पले गर्रयो क्षति गनी गनी कसैको वित्यो रानी कसैको नानी कोलाहल मच्चियो तिर्खायो पानी
​पहेँलो घाम बजारमा
काठमाडौं, असोज २५ – अयोग्य छापामार युवतीलाई प्रमुख पात्र बनाएर लेखिएको विष्णु भण्डारीको उपन्यास पहेँलो घाम प्राइम बुक्सले बजारमा ल्याएको छ ।
पहिलो इनास वर्ष साहित्य पुरस्कार आगमन गजल संग्रहलाई
युएई, असोज १८ - यस वर्षको इनास वर्ष साहित्य पुरस्कारको लागि कृति छनौट गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजले यही वर्ष स्थापना गरेको इनास वर्ष साहित्य पुरस्कार 'आगमन' गजल संग्रहलाई प्रदान गरिने भएको हो ।
​सयवर्ष पुग्नै लागेका राष्ट्रकवि अझै तन्नेरी हुनुको राज
काठमाडाै‌, असाेज ८ - राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे बिहीबारदेखि ९७ वर्ष पुग्नुभएको छ । एक शताब्दी अर्थात सय वर्ष उमेर पुग्न अब तीन वर्षमात्र बाँकी छ । उमेरले सय वर्ष पुग्न लागेपनि जोश, जाँगर हेर्दा उहाँलाई तन्नेरीजस्तै देखिन्छ ।
गीत : खुशी बाँडे खुशी बढ्छ सुख बाँडे सुख
– श्रमिक बराल, पोखरा । पिर साटे पिर घट्छ दुःख साटे दुःख अँध्यारोमा गुम्सिएर एक्लै बसी रोयौं भने दुःख अझै चुलिनेछ, पीडा झनै बल्झिनेछ
नेपाली साहित्य समाज कतारको अध्यक्षमा तीर्थ
कतार, भदौ २८ – अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कतार च्याप्टरको पाँचौं अधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
कथा – प्रेमी
फलामका साङ्लाले मेरा दुवै हात बाँधिएका छन् । म चिच्याँउछु, कराउछु तर धेरै टाडासम्म पनि मेरो पुकारको प्रत्युतर दिने कोहि छैन । मुनि बलिरहेको आगोको रापले मलाई पोलन थालिसक्यो । के येही हो मेरो अन्त्यको घडी ?
विजयकुमारलाई मदन र अंगुरबाबालाई जगदम्बा श्री पुरस्कार
काठमाडौं, भदौ २५ - यस पटक मदन पुरस्कार खुसी पुस्तकका लागि पत्रकार विजयकुमार पाण्डेलाई प्रदान गरिने भएको छ । जगदम्बा श्री पुरस्कार भने समाजसेवी अंगुरबाबा जोशीलाई प्रदान गरिने निर्णय गरिएको मदन पुरस्कार गुठीले जनाएको छ ।
काठमाण्डू सेल्फीको विमोचन
काठमाडौं, भदौ ११ – सञ्चारकर्मी, साहित्यकार तथा चलचित्रकर्मी प्रकाश सायमीले लेखेको पुस्तक काठमाण्डू सेल्फीको शुक्रबार विमोचन भएको छ ।
पथिकको ‘युनिका’ मह जोडीद्वारा विमोचन
काठमाडौं, भदौ ६ – मोफसलका लेखक घनश्याम पथिकको उपन्यास ‘युनिका’को एक कार्यक्रमबीच विमोचन गरिएको छ । शनिबार काठमाडौंको बत्तीसपुतली स्थित शिल्पी थिएटरमा भएको कार्यक्रममा नेपाली वरिष्ठ हाँस्यव्यंग्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले संयूक्त रुपमा विमोचन गर्नुभयो ।
कविता : अब जन्मदैनन् देवी देवता
दिव्य बज्राचार्य - सयौं वर्ष अगाडी जन्मेका बुद्ध के हामीलाई पुगेको हो र ? हजारौं वर्ष अगाडी जन्मेका कृष्ण के हामीलाई पुगेको हो र ? नारीलाई हुने अत्याचार विरुद्ध लड्न देवी दुर्गा हुनुपर्ने समय हो अज्ञानलाई हटाउने माता सरस्वती हुनुपर्ने समय हो
बेल्जियममा नेपाली साहित्य सम्मेलन
सन्तोष न्यौपाने/उज्यालो । बेल्जियम, भदौ १ – बेल्जियममा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन भएको छ । नेपाली भाषा तथा साहित्यको प्रचार प्रसार एवं संरक्षण गर्ने उदेश्यले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बेल्जियमले सम्मेलन गरेको हो ।
चितवनका सार्वजनिक भित्तामा कला
राधेश्याम खतिवडा/उज्यालो । चितवन, साउन ३१ – राजनीतिक दलका नाराले भरिने चितवनका पर्खालहरु अव सृजनात्मक कलाले भरिन थालेका छन् । आम सारोकारका विषयमा चित्र मार्फत सन्देश दिन अक्षर समूह चितवनको अगुवाईमा भित्तामा कला नाम दिएर चित्रकला बनाउन सुरु गरिएको छ ।
म पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता
मैले गाउँमा गएर कुनै संगठन बनाउनु पर्दैन मैले पार्टीको सिद्धान्तहरु कण्ठ नगरे पनि हुन्छ मैले कसैलाई पार्टीमा प्रवेश गराउनु पर्दैन
बेल्जियममा दुई दिने साहित्य सम्मेलन हुने
सन्तोष न्यौपाने/उज्यालो । बेल्जियम, साउन ३० - नेपाली भाषा र साहित्यको प्रचारप्रसार एवम् संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने उद्देश्ले अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बेल्जियमले सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । सम्मेलन आइतबार र सोमबार गरेर दुई दिनसम्म चल्नेछ ।
नेपाल–चीन मैत्रीका गौरवमय ६० वर्ष नामक पुस्तक सार्वजनिक
काठमाडौं, साउन २४ – नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्ष पुगेको अवसर पारेर 'नेपाल–चीन मैत्रीका गौरवमय ६० वर्ष' नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ ।
रामराजा प्रसाद सिंहको जीवनी पुस्तक अब हिन्दी भाषामा पनि
कुमार रञ्जित/उज्यालो । काठमाडौं, साउन २४ – प्रथम गणतन्त्रवादी नेताको पहिचान बनाएका स्वर्गीय रामराजाप्रसाद सिंहको जीवनीमा आधारित आत्मवृत्तान्त पुस्तक अब हिन्दी भाषीका लागि पनि सुलभ भएको छ ।
नेपाल भाषामा लेखिएको नाटक भृकुटीको अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकामा विमोचन
काठमाडौं, साउन १४ – नेपाल भाषामा लेखिएको नाटक भृकुटीको अंग्रेजी अनुवाद गरिएको किताव अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा विमोचन भएको छ ।
​भानुको सम्झनामा कविता
काठमाडौं, साउन २ – २ सय २ औं भानुभक्त जयन्तीको अवसर पारेर विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा कविता वाचन तथा वृत्तचित्र प्रदर्शन कार्यक्रम भएको छ । अंग्रेजी विभाग अन्तर्गत ‘क्रिएटिभ लिटररी फोरम’ को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पछिल्लो पुस्ताका चर्चित कविहरुले भानुभत्तलाई संझिदै आफ्नो रचना वाचन गरेका थिए ।
पुस्तौँ पुस्तादेखि पिँजडामा बन्द म छोरी केही वर्षपछि यो पिँजडाबाट सरुवा गरिनेछ मलाई ।
कविता-तिम्रो डायरीबाट टाढा हुदै
दिब्या बज्राचार्य - तिमी पाना भरी मेरै बारेमा लेख्छौ दिन भरी मलाई नै सम्झीरहन्छौ कति राती झस्केर तिमि उठ्छौ विध्वंसकारी, विनाशकारी
एक हुल मानिसहरु आए नियाले भत्किएको, चर्किएको घर जोखिम, अयोग्य खातामा लेखे झिके ड्याम्म लगाए रातो स्टिकर
कविता - भुईंचालो
नीरु शिवाकोटी - घर पनि छैन,शहर पनि छैन त्यसैले बाच्ने अब रहर पनि छैन ।
टुँडिखेलमा भूकम्पका स्वरहरु
काठमाडौं, जेठ १५ नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको आयोजनामा टुँडिखेलको सैनिक मैदानको राहत शिविरमा जेठ १६ गते दिउसो २स् ३० बजे देशका सर्जकहरु भेला भएर बिनासकारी महा भूकम्प पछिका सिर्जना सुनाउने भएका छन् । राष्ट्रकवि माधव घिमिरे प्रमुख अतिथि रहनु हुने विशेष कवि गोष्ठीमा डेढ दर्जन कविहरुले कविता, मुक्तक, गीत, गजल आदि सुनाउने छन् ।
काठमाडौं, जेठ ९ – युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको सम्झना गरिएको छ । १ सय ४ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर शनिबार युगकवि श्रेष्ठको सम्झना गरिएको हो ।
खुशीको खोजी - मलाई खोज तिमी कतै थिचिएकी छु कतै मिचिएकी छु खोज मेरो विभत्स मुटुलाई
मलार्इ माफ गर आमा
अनुषा न्यौपाने - मलार्इ माफ गर आमा आउन सकिन म तिम्रो आँसु पुछ्न भत्किएको घर बनाउन
ईष्या मानव प्रति प्रकट भयो भूकम्प ठुलो गयो ! काप्यो थर्र थर्री मेरुदण्ड देशको नरसंहार ठूलो भयो !!
अब यो भुँईचालो भन्ने चिजको नसा पो लागेजस्तो छ । नआउँदा कस्तो कस्तो लाग्ने आउँदा नि कस्तो कस्तो लाग्ने ।। घरको टुप्पामा बस्दा नि घर भत्किएर झरिएला भन्ने डर । फेदमा बस्दा पनि भत्केर थिच्ला भन्ने डर ।। अब यो भुँईचालो भन्ने चिजको नसा पो लागेजस्तो छ । नआउादा कस्तो कस्तो लाग्ने आउँदा नि कस्तो कस्तो लाग्ने ।।
घर हल्यो तार हल्यो भुँईचालो गएछ
गीत – घर हल्यो तार हल्यो भुँईचालो गएछ ।
१४ जना स्रष्टा सम्मानित
काठमाडौं, वैशाख ११ – नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघले १४ जना स्रष्टालाई सम्मान गरेको छ । महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा एक समारोह गरेर १४ जना स्रष्टालाई सम्मान गरेको हो ।
बृहत पुस्तक प्रदर्शनी सुरु
काठमाडौं, वैशाख ११ – काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बृहत पुस्तक प्रदर्शनी सुरु भएको छ । डिकुरा पब्लिकेशन र रिड एण्ड ग्रो पब्लिकेशनको आयोजनमा शुक्रबार बृहत पुस्तक प्रदर्शनी सुरु भएको हो ।
‘मालिक म यो गोरखा राज्यमा अढाईसय वर्षपछि बौलाएँ’
काठमाडौं, वैशाख ११ – मुलुकमा लोकतन्त्र आएको ९ वर्ष भएको छ । लोकतन्त्र दिवस संघारमै आइपुग्दा सबैले ९ वर्षअघिको आन्दोलन सम्झिएका छन् । आन्दोलनलाई उर्जा थप्न सबै तह र क्षेत्रका नागरिकको महत्वपूर्ण योगदान छ ।
मिराको सम्झनामा हरिवंश आचार्यको कविता – तिमीलाई सम्झँदा
तिमी बिरामी पर्थयौ, म कुरूवा बस्थे। कति आनन्द लाग्थ्यो, म सँगै हुन्थे।।
साहित्यकारले गरे पारिजातको सम्झना
काठमाडौं, वैशाख ५ – साहित्यकार पारिजातको व्यक्तित्वको चर्चा गरिएको छ । पारिजात स्मृति प्रतिष्ठानले २२ औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा पारिजातको व्यक्तित्वको चर्चा गरिएको हो ।
रमेश गिरी ‘आशा’ - ‘आमा, ए आमा, आमा’—आमाले घ्यार्रघ्यार्र आवाज निकालेर लामो स्वास तानिरहेको देखेर आत्तिएको आशिष आमाको जिउ हल्लाउँदै बोलाउन थाल्छ । आमा निस्वास एकोहोरो छोराको अनुहार हेरिरहन्छिन् । मानौ उनी छोरा आशिषसँग अन्तिम विदाई मागिरहेछकी छिन् ।
नयाँ बर्षको स्वागत गर्न झमक घिमिरेको घरमा साहित्यिक जमघट
धनकुटा, चैत ३० – नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा धनकुटाका साहित्यकर्मीहरुले साहित्यकार झमक घिमिरेको घरमा गएर नयाँ वर्षको स्वागत गरेका छन् ।
राष्ट्रकवि घिमिरेलाई सम्मान
काठमाडौं, चैत २३ – महिला गीतकार संघले राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई अभिनन्दन गरेको छ । महिला गीतकार संघले सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी राष्ट्रकवि घिमिरेलाई ५० हजार रुपैयाँ सहित अभिनन्दन गरेको हो ।
अन्जना सापकोटा - देश भरी विकाशको फूल फूलेको बेला आउँछु आमा।। गैरी खेतमा मार्सी धान झुलेको बेला आउँछु आमा।। भाइ चाराको सम्बन्ध गाढा अनि निस्वार्थ होस् , शान्ति छर्दै परेवा जोडी डुलेको बेला आउँछु आमा
पुस्तकमा ‘सूचनाको हक प्राप्ति र प्रयोग’
काठमाडौं, चैत २० – पत्रकार एकराज पाठकद्वारा लिखित ‘सूचनाको हक प्राप्ति र प्रयोग’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । पुस्तकमा विश्वमा सूचनाको हकको अवधारणा, नेपालमा यसको अभ्यास, कानुनी मान्यता, कार्यान्वयनका पक्षमा देखिएका सफलता र असफलताका विषय समेटिएका छन् ।